आजभोली दैनिकि कसरी बित्दै छ ? कत्तिको बेस्तता छ दैनिकी ?
– खासै ब्यस्त छैन बन्दबन्दिले गर्दा फुर्सदमा नै छु । पदमा बसेको केहि समयमा नै लकडाउन भएका कारणले गर्दा आफ्नो योजनालाई यतिबेला प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन । तर, खेलाडि र खेल पेशामा भने मेहेनग गरेर भएपनि परिवर्तन भने ल्याउने संकल्पका साथ आएकोले खेलकुदको आगामी दिनलाई कसरी परीवर्तन गर्ने भन्ने योजनामै मेरो दैनिकि वित्ने गरेको छ ।
खेलकुद क्षेत्रमा कसरी आकर्षित हुनुभयो ??
– म सानै देखि खेलकुदप्रती चासो राख्थ्य । स्कुलमा हुँदापनी भलिबल खेल खेल्ने गरेको थिए । साथै मैले तेक्वान्दो खेलमा सक्रिय रुपले भाग समेत लिएको थिए । तेक्वान्दो खेल प्रती म निकै आकर्षिण हुनपुगे । मेरो दाईसमेत तेक्वान्दोको पुरानो खेलाडि भएको कारणले गर्दा मलाई घरमा नै सिक्ने र खेल्ने समेत अवसर मिल्यो । त्यस अवस्थामा खेलाडिको धेरै महत्व भने दिईदैन थियो । तर, कालान्तरमा मैले नै खेल क्षेत्रलाई कतातिर लग्ने भन्ने खेलकुद विकासको काभ्रेको प्रतिनिधि नै हुने अवसर मिलेको कारणले गर्दा, विगतमा दिनमा गरेका सघंर्षलाई सम्झदै आगामी दिनका लागि आफ्ना सन्तती खेलप्रेमी दाजुभाई तथा दिदिबहिनीलाई मैले खेल क्षेत्रमा भविष्य देखाउनु नै मेरो कार्यकालको सफलता भने हो ।
– लाकडाउनले खेलकुदलाई मात्र नभएर सम्पुर्ण क्षेत्रमा असर पारेको छ । अहिलेका अवस्थालाई हेर्ने हो भने खेलकुद प्रेमी र खेलाडिलाई समेत आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर मिलेको छैन । यद्यपी, कोरोना एउटा सरुवा रोग भएका कारणले गर्दा यसलाई गलत मानेर यो हाम्रो सत्रु नै सोच्न पर्ने अवस्था भने छैन । किनभने विश्व जगत नै यतिबेला कोरोनाको महामारीमा परेको बेलामा मैले खेल क्षेत्रलाई मात्रै असर परेको छ भन्नु मेरो मुर्खता हुन जान्छ । तर, खेल क्षेत्रलाई अलि धेरै असर भने गर्दछ । किनभने, खेल सधै समुहमा खेलिने गर्दछ र कोरोनाका कारण एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई भेट्न मिल्ने अवस्था समेत रहेको छैन ।
तपाईं काभ्रे जिल्लाको खेलकुदको अध्यक्ष हुनु भन्दा पहिले र भैसकेपछी के परिवर्तन महसुश गर्नु भएको छ
– खेलकुदको जिल्ला अध्यक्ष हुनु भन्दा पहिले म समाजिक क्षेत्रमा नै सक्रिय थिए । अहिले अध्यक्ष भएसँगै अर्को समाजिक दायित्व बडेको भने छ । यसले मलाई नयाँ अनुभवको अवसर मिलेको छ । सानो बेलादेखि नै नेतृत्व गर्ने तहमा रहेर कार्य गरेकाले खेलकुद विकासलाई नेतृत्व गर्न गाह्रो नै हुने अवस्था भने छैन । तर, पछिल्लो समयमा आफ्नो क्रियशिलता देखाउने अवसर फेरी प्राप्त भएको छ । खेलाडिलाई नेपालमा नै भविष्यको सुनीष्चितता गर्ने अर्को अवसर मिलेको छ । यसकारणले गर्दा मैले मेरो जीवनको लक्ष्य नै खेलाडिको भविष्यको सुनिष्चीततातर्फ दिएको छु ।
– राजनीतिमा म नीकैनै क्रियसिल रहेको छु । लामो समयदेखि राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय भएको हुनाले मलमई राजनीतिमा चासो समेत रहने गर्दछ । राजनीतिमा आकर्षित नभएको भए आज म यो स्थानमा पनि हुन्न थिए । राजनीति लामो संघर्ष, बलिदानको कथा हो । यँहा देशका लाग कसले कति बलिदान गरे भन्ने कुराको मुल्यांकन हुने गर्दछ । पछिल्लो समयको राजनिती निकै नै गम्भीर मोडमा छ । नेतृत्वले रास्ट्र र जनता प्रती दायित्व बोध नगरेको होकि भन्ने मेरो व्यक्तिगत आशय हो । यो बेलामा लडाई झगडा गरेर छिमेकी हसाउने बेला भने होइन । हामीलाई ईतीहासमा नै पहिलो पटक दुई तिहाई जनताको विश्वास रहेको छ । यस विश्वासलाई हाम्रा नेतृत्वले हाम्रो नीजी स्वार्थ भन्दा माथि रहेर देशका लागि केहि गर्न सकेउ भने बल्ल आजको दिनमा राजनीतिको महत्व रहने गरेको छ ।
– रोशी गाउँपालिका काभ्रेको नै सुन्दर र संभावना बोकेको गाउँपालिका हो । १३ वटा स्थानीय निकायसँग मेरो सहयोग र सहकार्य हुने गरेको छ । यद्यपी, रोशी गाउँपालिकामा नेकपाको नेतृत्व भने छैन । यो हुदा हुदै पनि केहि कार्य भईरहेको छ र हुन नसकेको केहि कार्यहरुलाई म पालिकाअध्यक्षसँग नै बसेर विना विवाद गर्न आवश्यक कार्यको सल्लाह समेत दिने गरेको छु ।
– योजनाहरु धेरै बनाएको छु तर, हाल बन्दाबन्दी को अबस्थामा भएको कारणले खासै योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । आगामी दिनमा बन्दाबन्दी खुलेसँगै खेलाडि अझै विशेषतः काभ्रे जिल्लाका खेलाडिहरुका निम्ती बनाएका योजनाहरुलाई क्रमागत रुपमा कार्यान्वयनमा लग्दै नयाँ खेलहरुलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने मेरो योजना रहेको छ ।
– छोटो समयमा भन्दा पनि म निकै लामो समय देखि नै काभ्रे जिल्लामा राजनीतिमा सक्रिय छु । २०५६ सालमा तत्कालिन अनेरास्ववियुको जिल्ला सदस्य रहेको थिए । त्यति बेला पनि म जिल्लाका हरेक गाउँमा पुग्ने गरेको थिए । पछिल्लो समयमा आध्ययनको शिलशिलामा जिल्ला बाट काठमाडांैतर्फ स्थानान्तर हुनुपर्यो । काठमाडैंको क्याम्पसमा समेत एक पटक स्ववियू उप सभापति र अर्को पटक सभापति समेत रहेर कार्य निर्वाह गरिसकेको थिए । सै कारणले गर्दा काभ्रेमा अलि काम परिचित भएको महसुस भएको मात्र हो ।
– खेलाडिहरुले अलि आत्मानिर्भररुपले खेलकुदलाई अगाडि बढाउने हो भने सकिन्छ । त्यो तपाईं हाम्रो मात्र प्रयास ले सम्भावना छैन राज्यको तर्फ बाट नै विशेष योजनाको आवश्यकता रहेको छ । हामी त अभियान्ता मात्रै हौ । हाम्रो योजना र ऐजेण्डा यहि नै भए पनि राज्यको सहयोग पाईयो भने सफल नहुने भन्ने कुरा पनि रहदैन ।
– अन्तमा मेरो आफ्नु बिचारलाई जनता माझ पुर्याउन सहयोग गर्नु हुने तपाईं लगायत तपाईं को सम्पुर्ण टिमलाइ र यश अनलाइन मिडिया लाई बिशेश धन्यवाद दिन चहान्छु ।